War-murtiyeedkii Shirka Muqdisho oo Ay Kismaayo hoos u dhigtey
By Caalamka On Oct 3, 2019
MadaxweynahaMaamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa mar kale ka hadlay siyaasadda guud ee dalka iyo go’doominta isaga lagu sameeyay.
Dhinacyo badan ayuu Axmed Madoobe kaga hadlay Khudbad uu ka jeediyay Kismaayo xalay,waxaana uu hadalkiisu ahaa;
Axmed oo ka hadlay xaalada uu dalka marayo iyo si gaar ah arimaha Jubbaland wuxuu sheegay in kadib Doorashooyinkii Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Jubbaland ay Dowlada Jubbaland xooga saartay sidii loo dhamayn lahaa dadkii tabashooyinka qabay isla markana arintaas guulo la taaban karo laga gaaray wuxuu intaas ku daray Madaxweynahu in iyadoo wali albaabadu ay furan yihiin hadana aan cidna laga ogolanaynin in nabadgalyada ay wax u dhinto arintaasna ay tahay masuuliyad ay leedahay Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Waxaa Madaxweynahu uu intaas ku daray in Doorashooyinku markii ay dhamaadeen ay Jubbaland diyaar u ahayd sidii Khilaafka kala dhexeeya Dowlada Federaalka ah wada hadal loogu dhamayn lahaa balse taas badalkeeda Xukuumada Federaalka ah ay xayiraado iyo cunaqabatayno kusoo rogtay dadka ree Jubbaland iyadoo uu Madaxweynahu sheegay in dad shacab ah ay naftooda ku waayeen xayiraada dhinaca duulimaadka ah ee Dowlada Federaalku ay kusoo rogtay dadka ree Jubbaland taas oo la iskula xisaabtami doono.
Waxaa Madaxweynahu uu sheegay in maamulka hawada Soomaaliya oo aad loogu hanwaynaa sidii Soomaaliya ay gacanteeda usoo gali lahayd maanta la is waydiinayo suurta galnimada in ayna Xukuumada Federaalku masuul ka noqon Karin maadama ay arimo siyaasadeed u adeegsanayaan oo lagu dhibaataynayo dadka shacabka ah.
Dhamaan cunaqabataynada Dowlada Federaalka ah ay kusoo rogtay dadka Jubbaland ayuu Madaxweynahu sheegay inayna waxba saamayn ah ku yeelanaynin sida ay diyaarka ugu yihiin Midnimada iyo wadajirka Umada Soomaaliyeed ayna diyaar u yihiin sidii lagu yaqaanay in shacabka Soomaaliyeed ay isku keenaan oo Ayaaha dalkan laga arinsado.
Madaxweynahu waxaa kale oo uu sheegay in go’aanka garoonka diyaaradaha Muqdisho lagaga celiyay Madaxweynahii hore ee Soomaaliya sheikh shariif sheikh Axmed uu yahay xad gudub aan sharciga dalka meela kaga oolin loona baahan yahay in wax la iska waydiiyo.
Isagoo ka hadlayay shirka kasocda Magaalada Muqdisho ee Beesha Caalamka iyo Dowlada Federaalka ah u dhexeeya ayuu Madaxweynahu sheegay in hanaanka siyaasada loo dhan yahay ayna dalka ka jirin sidaas darteedna wax walba oo shirkaas kasoo baxa ayna anfacaynin dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay kahor in arimaha masiiriga ah heshiis laga gaaro sida Doorashooyinka iyo dhamaystirka dastuurka.
Madaxweynahu waxaa kale oo uu sheegay in hanaanka dayn cafintu uuna dhaqan gali Karin iyadoo Madaxda Villa Soomaaliya joogta ay ku tumanayaan shirciga dalka waxaa uu Madaxweynahu sheegay in qof walba oo Soomaali ah uu qayb ka yahay daynta dalka lagu leeyahay balse wadadii lagaga bixi lahaa ayna haynin Dowlada Federaalka ah.
Dowladda Federaalka ah iyo Beesha Caalamka ayaa si cad isaga diiday Doorashadii Kismaayo ee uu ku soo baxay Axmed waxaana ay ku tilmaameen sharci darro
22 mins ago 321,403 0
30 mins ago 125,403 0
57 mins ago 23,614 0